Radio Don Bosco - Nientan-kafaliana... i Jesoa
I Jesoa nientan-kafaliana tamin'ny Fanahy Masina no ambaran'ny Evanjely. Ao amin'ny fiekem-pinoantsika dia hoe noforonin'ny Fanahy Masina tao an-kibon'i Maria Virjiny i Jesoa. Ka tsy hoe nahatorontoronina azy fotsiny ny Fanahy Masina dia izay, fa nomba azy nandritra ny fiainany manontolo, ary mbola manohy ny asany ao amin'ny Eglizy, hatramin'izao.
Nahomby tamin'ny asany i Jesoa. Noraisin'ireo madinika sy tso-po manko, ny Fanjakan'Andriamanitra notorin'Izy sy ny mpianany. Misaotra ny Ray Izy satria, ny Ray no nanokatra ny fon'ireto madinika, handray ny fanambarana. Noho izany, tsy izay mahay akory no masina, fa izay manetry tena, manaiky an'Andriamanitra. Sambatra ny masonareo mahita izao androm-pamonjena izao, hoy i Jesoa. Mahita an'i Jesoa sy ny asany, mandre ny teniny, manatri-maso ny fiainany, ka mino. Misy manko ireo mahita, na mandre fa tsy mino.
Fepetra voalohany hanatonana an'Andriamanitra ny fahatsoram-po. Tsy fahaizana ara-tsaina, fa fo misokatra hidiran'Andriamanitra. Miray hafaliana amin'i Jesoa ny mpianatra, faly fa tafita tsikelikely ny Fanjakan'Andriamanitra. Hanentanan'ny papa François antsika matetika : mba ho faly amin'ny fiainana isika, satria loharanom-pahamasinana ny hafaliana, ary ny Fanjakan'Andriamanitra dia fanjakan'ny hafaliana.
Hanenika antsika mianakavy anie, ny hafaliana avy amin'ny Fanahy Masina, tahaka ny hafaliana nanenika sy nampientana an'i Jesoa. Amen.